Naghachi CR2 Files na CR2 Photo Recovery Software
Olee otú Naghachi Lost CR2 Photos
> Resource> Naghachi> Olee naghachi Lost CR2 Photos
Canon bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu dijitalụ ese foto na enyi na enyi ala, nkecha na elu ruru eru atụmatụ, na ọ na-ewere dị ka a mma nchekwa na-ajụ na-photos e site Canon igwefoto. Ma ọ bụ ukwuu kwere omume na foto gị na Canon dijitalụ ese foto nwere ike ina emerụ ma ọ bụ keerughi otu ụbọchị, n'ihi ya, ị ga mma nkwado ndabere na mpaghara dị mkpa photos. The data ọnwụ bụ nnọọ njọ nsogbu na ọ bụrụ na ị ọnwụ foto na CR2 raw faịlụ Ọkpụkpọ si egbe ala ese foto, na mgbe ahụ ị chọrọ ime CR2 foto mgbake.
Ị nwere ike ọnwụ CR2 photos ruru ka mmadụ na mberede ihichapụ, formatting, emerụ kaadị ebe nchekwa ma ọ bụ mmadụ ọ bụla ọzọ njehie. Ma adịghị na-enwe nkụda mmụọ dị ka ị pụrụ mfe ime CR2 foto mgbake na otu usoro ihe omume. Nke a foto mgbake software na-enye gị Ohere agbake CR2 faịlụ mfe na rụọ ọrụ nke ọma. Dị ka gị dị iche iche sistemụ, na-ahọrọ nri version nke foto mgbake software. N'ebe a, anyị na-egosi gị otú ị naghachi CR2 faịlụ na Windows, na nzọụkwụ ime ya na Mac ndị yiri.
Olee otú ime CR2 foto mgbake?
Firstly wụnye na ẹkedori CR2 foto mgbake software. Ebe a họrọ nchekwa ase na nwere ehichapụ, formatted, furu efu ma ọ keerughi CR2 photos, gụnyere igwefoto dijitalụ, kaadị ebe nchekwa, USB ọkwọ ụgbọala ma ọ bụ ndị ọzọ uka nchekwa na ngwaọrụ na esịtidem ike-akwọ ụgbọala.
Nzọụkwụ 1: Họrọ nkebi ebe ị ọnwụ CR2 faịlụ
Site ndepụta nke mgbagha draịva ebe a, họrọ onye nkebi nke gị furu efu CR2 faịlụ ịchọta, wee pịa "iṅomi" button na-amalite ịgụ isiokwu.
Cheta na: Ọ bụrụ na ị na-echeta kpọmkwem formats n'ihi na gị furu efu faịlụ, ebe i nwere ike na-eji "iyo Nhọrọ" iji họrọ otu ma ọ bụ karịa faịlụ formats, ọrụ a na-enyere gị ka ibelata scanning oge na rụọ ọrụ nke ọma ahụ furu efu faịlụ. Ka ihe atụ, ebe a anyị na-ahọrọ na CR2 faịlụ na pịa "iṅomi" bọtịnụ.
Nzọụkwụ 2: Preview na-ahụ furu efu CR2 faịlụ
Mgbe iṅomi dị n'elu, nke furu efu CR2 faịlụ depụta ebe a n'ihi na ị na-ahọrọ. Ị na-enwe ike ihuchalu ma bulie ihe ị chọrọ iji naghachi na pịa "Naghachi" button.
1. Pịnye faịlụ aha ma ọ bụ nyo na nsonaazụ ọchụchọ ka kpomkwem ịhụ gị furu efu faịlụ a na obere oge.
2. Ị nwere ike "kwusi" ma ọ bụ "kwụsị" na usoro nke ịgụ isiokwu mgbe ị na-ahụ furu efu faịlụ na chọrọ iji naghachi ya ozugbo. Mgbe ahụ nọgide ike iṅomi ndị ọzọ faịlụ ma ọ bụrụ mkpa.
3. Pịa "Save iṅomi" button ịzọpụta scanning N'ihi nke mere na ị na-enwe ike ịnọgide na-foto mgbake n'oge ọ bụla dị na-amasị gị.
Nzọụkwụ 3: Ezipụta mmepụta nchekwa ịzọpụta CR2 faịlụ mgbe agbake
Họrọ a ebe ebe ị chọrọ ịzọpụta recoverable CR2 faịlụ, wee pịa "Naghachi" button. Lee, anyị ukwuu ikwu na ị na họrọ ebe ọzọ si gị isi iyi partitions ebe ị ọnwụ na CR2 faịlụ.
Ebe ọ bụ, n'ikpeazụ gị furu efu CR2 faịlụ na-aga azụ ọnụ ọzọ!
Video nkuzi nke CR2 foto mgbake
Olee otú Naghachi Lost ma ọ bụ ehichapụ Data si Centon Electronics DataStick